Haweeney shiinees ah oo lagu xadgudbay oo dalka laga saarayo. | Somaliska
Laanta socdaalka ee Iswiidhan (Migrationsverket) ayaa go'aaan ku gaartay in dalka laga saaro haweenay u dhalatay dalka Shiinaha, ka dib markii ay luntay xaquuqdii degenaanshaha ee ay ku joogtay dalka Sweden, markii ninkeeda oo Iswiidish ahaa uu furay ka dib xadgudubyo soo noqnoqday oo uu ku sameeyay. Ninka oo da lixdanaad ku jira, ayaa talaadadii lagu xukumay 10 bilood oo xarig ah ka dib markii uu xadgudubyo kala duwan u geystay xaaskiisa shiineeska ah ee uu ka bartay qadka Internetka. Ninka ayaa xaaskiisa furay ka dib markii ay booliska ogeysiisay xadgudubyada uu kula kacay, taas oo meesha ka saartay xuquuqdii degenaanshaha ee ay haweenaydu ku joogtay dalkaan, intaas ka dib ayaa Laanta socdaalku xukmisay in haweenayda iyo caruurteeda loo celiyo dalka Shiinaha. "Racfaan ayaan ka xareysanay mackamada Socdaalka" ayuu yiri haweenayda qareenkeeda, Uno Carlsson. "Balse ninkeedii furay ayaa sidoo kale maxkamada u soo qoray, oo codsadey in wadanka laga saaro" ayuu intaas ku daray Uno Carlsson. Xadgudubyada lagula kacay haweenaydan ayaa ahaa kuwo badan, mararka qaarkoodna gacan ka hadal ahaa. Waxaa la sheegay in ninku uu xaaskiisa timaha ka jaray, uu ku xiray meesha soonaha ee laisku kululeeyo, madaxa uga istaagay, uuna garaacay, ka dibna uu furay. Furiinka ayaa natiijadiisu waxa ay tahay in haweenayda iyo caruurteedu aysan wax xiriir ah oo dambe la lahayn wadanka Iswiidhan aysana lahayn wax xuquuq sharci ah oo ay ku joogaan dalkan, arintaan oo ah mid ay waligeed ka cabsanaysay in ay ku dhacdo haddii ay sheegto xadgudubyada uu ku haayay ninkeedu. Waxaan ka soo xiganahay wargeyska TheLocal.se
Laanta socdaalka ee Iswiidhan (Migrationsverket) ayaa go’aaan ku gaartay in dalka laga saaro haweenay u dhalatay dalka Shiinaha, ka dib markii ay luntay xaquuqdii degenaanshaha ee ay ku joogtay dalka Sweden, markii ninkeeda oo Iswiidish ahaa uu furay ka dib xadgudubyo soo noqnoqday oo uu ku sameeyay.
Ninka oo da lixdanaad ku jira, ayaa talaadadii lagu xukumay 10 bilood oo xarig ah ka dib markii uu xadgudubyo kala duwan u geystay xaaskiisa shiineeska ah ee uu ka bartay qadka Internetka.
Ninka ayaa xaaskiisa furay ka dib markii ay booliska ogeysiisay xadgudubyada uu kula kacay, taas oo meesha ka saartay xuquuqdii degenaanshaha ee ay haweenaydu ku joogtay dalkaan, intaas ka dib ayaa Laanta socdaalku xukmisay in haweenayda iyo caruurteeda loo celiyo dalka Shiinaha.
“Racfaan ayaan ka xareysanay mackamada Socdaalka” ayuu yiri haweenayda qareenkeeda, Uno Carlsson.
“Balse ninkeedii furay ayaa sidoo kale maxkamada u soo qoray, oo codsadey in wadanka laga saaro” ayuu intaas ku daray Uno Carlsson.
Xadgudubyada lagula kacay haweenaydan ayaa ahaa kuwo badan, mararka qaarkoodna gacan ka hadal ahaa. Waxaa la sheegay in ninku uu xaaskiisa timaha ka jaray, uu ku xiray meesha soonaha ee laisku kululeeyo, madaxa uga istaagay, uuna garaacay, ka dibna uu furay.
Furiinka ayaa natiijadiisu waxa ay tahay in haweenayda iyo caruurteedu aysan wax xiriir ah oo dambe la lahayn wadanka Iswiidhan aysana lahayn wax xuquuq sharci ah oo ay ku joogaan dalkan, arintaan oo ah mid ay waligeed ka cabsanaysay in ay ku dhacdo haddii ay sheegto xadgudubyada uu ku haayay ninkeedu.
Waxaan ka soo xiganahay wargeyska TheLocal.se
April 27, 2010 at 17:31
Runtii waa arin murugo leh. Migrationsverket waa in ay arintaan dib u eegaan.